Soomaali soo dhaweysay dilka Osama - BBC Somali
Soomaali soo dhaweysay dilka Osama
4 Maajo 2011
Boqolaal Soomaali ah ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada Muqdisho, kuwaasi oo u dabaaldegaya dhimashada Osama Bin Laden.
Banaanbaxa oo ay soo qabanqaabiyeen ururada bulshada rayidka ah ayaa waxa ay weydiisteen in ammaanka ay ka saaciddo dowladda KMG ah, oo u dirtay ciidamo ilaaliya.
Dadka isku soo baxay ayaa sitay boorar ay ku qornaayeen Osama Zero, Obama number One, waxaana ay halkaasi ku gubeen calanka Madow ee al-Shabaab.
Dhinaca kale hadal ay soo saartay dowladda KMG ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegtay inay heegan sare galineyso ciidamada ammaanka ee dalka, iyaga oo sheegay in laga cabsi qabo weerarro ka yimaad al-Shabaab.
Guddoomuyaha ururada bulshada gobolka Banaadir Muxidiin Xasan Afrax oo BBC la hadlay ayaa sheegay in dilka Osama Bin Laden uu rajeynayo inay saameyn ku yeelato oo ay wax ka bedesho dhibaatada Soomaaliya ka taaga.